Waxbarashada dadka waaweyn - sida in ay dib ugu dugsiga | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Ma rabtaa in aad ku dhameysan waxbarashadaada? Tabobaro shaqo cusub ama aad u hagaajisid xirfadaha? Tag jaamacad ama bartaan Ingiriisi? Ogow sida aad waxbarashada dadka waaweyn ah ka heli kartaa internetka ama bulshadaada.
Magacyada kale ee waxbarashada dadka waaweyn waa waxbarashada sii wadaan, waxbarashada sare, iyo waxbarashada nolosha oo dhan. All of ereyadan oo ku saabsan siyaabaha ay dadka waaweyn ku baran kartaa waa. badan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee waxbarashada dadka waaweyn Baro.
Waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn - akhriska iyo qoraalka
Xataa sidii qof weyn, waxaad baran kartaa wax akhriska iyo qorista. Waa sahlan tahay si ay u bartaan fasalka ama macalin (mid-ka-mid ah macalimiinta). Waxaa jira meelo badan oo dadka waaweyn tegi karaa akhriska iyo qoritaanka casharada. kulliyadaha bulshada badankooda iyo maktabadaha leeyihiin xarumaha waxbarashada dadka waaweyn in la baro akhriska iyo qoraalka.
Baro wax akhriska iyo qorista
Raadi maktabadaha ee gobolka
Bulshooyin badan waxay leeyihiin fasalo Ingiriis maalintii ama fiidkii. Waxaad ka heli doontaa at maktabadaha, xarumaha bulshada, iyo xarumaha waxbarashada dadka waaweyn ee jaamacadaha. Haddii ay kugu adagtahay inaad si aad u hesho fasal, bilaabaan barashada online. Waxaa jira fasalo dhowr lacag la'aan ah si lagaaga caawiyo in aad bartaan.
Baro Ingiriisi online
Raadi Kulliyadda bulshada
shahaadooyinka dugsiga sare ee dadka waaweyn
In dadka waaweyn ee United States heli kartaa GED a®, HiSET ama diblooma TASC si uu u badalo waxbarashada dugsiga sare. Waxaad heli doontaa inaad wax ka barato waayo imtixaanada, laakiin waa badan dhakhso badan dugsiga sare. Waxaa jira maalintii ama fiidkii fasallada kulliyada xaafaddaada ama maktabadda. Ama waxaad ka qaadan kartaa GED online lacag la'aan ah® fasalka diyaarinta luqado badan.
GED online Free® fasalka
Tababarka shaqada iyo xirfadaha shaqo
Marka aad eegto shaqo, laga yaabaa in aad u baahan tahay xirfado shaqo aasaasiga ah. laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u bartaan sida loo isticmaalo kombiyuutar. Ama waxaa laga yaabaa in aad rabto in tababar shaqo gaar ah, sida shaqo ee warshadaha cuntada. Waxaad ka heli kartaa dhammaan noocyada tababar shaqo xarumaha shaqada, hay'adaha dejinta, kulliyadaha bulshada, iyo ururada maxaliga ah.
Sida loo helo barnaamijyada tababarka shaqo oo aad u hesho xirfado shaqo
Waxbarashada sare waxaa loola jeedaa waxbarashada dugsiga sare ka dib. Waxbarashada sare sida caadiga ah dhacdaa in machad ama jaamacad. Kulliyadaha ee Maraykanka waxay bixiyaan koorsooyin labo sano ah oo cayn kasta ah. Qaar badan oo iyaga ka mid ah oo aad loogu diyaariyo xirfado. Jaamacaduhu waxay bixiyaan afar sanno ama ka badan koorsooyinka. Haddii aad ka soo qalin jabiyaan jaamacad, waxaad codsan kartaa shaqooyinka u baahan shahaado. Waxaad kaloo qaadan kartaa fasalada waxbarashada sare online.
koorsooyinka Online iyo darajo leh Coursera
khayraadka More Xarunta Qaxootiga Online
Fadlan isticmaal Finder ee khayraadka RCO inay kaa caawiyaan inaad hesho waxbarashada dadka waaweyn ee aad u baahan FindHello App